विभिन्न ठाउँमा जाहेरी पर्दा पल वि रुद्धको मुद्धा झन् बलियो हुन्छ ? अधिवक्ता यसो भन्छन् (भिडियो सहित) – Ap Nepal
March 9, 2022 270
यतिबेला नेपाली कला क्षेत्र अभिनेता पल शाह प्रक`रणले तरंगित छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरुद्ध उजुरी दिएपछि पल केही दिनदेखि प्र`हरी हिरासतमा छन् । प्रह`रीले पललाई हिरासतमा राखेर अनु`सन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेले`ब्रिटीहरु खुल्न थालेका छन् ।
सुरुको समय यस बिषयमा अधिकांश कला`कर्मी मौन थिए । तर पछिल्लो दिनमा भने सेले`ब्रिटीहरु एकपछि अर्को गर्दै खुल्न थालेका हुन् । उनी`हरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन नारीको सम्मान गर्न र बालबालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्न`समेत आह्वान गरिरहेका बेला पल भने पछिल्ला दिनमा भित्र भित्रै टु`ट्न थालेका छन् । एकातिर नाबालिग गायिका पनि विक्षि`प्त पक्कै बनेकी छिन् ।
जब’रज’स्ती क’र’णीको मु`द्दा खेपिरहेका चलचित्र अभिनेता पल शाहलाई तनहुँ जिल्ला अदा`लतले थप १२ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । फागुन १५ बाट पल शाह तनहुँ प्र`हरीको हिरा`सतमा छन् । आइतबार दोस्रोपटक म्याद थप हुँदासम्म प्रह`रीले पल शाहसहित ५ जनाको बयान लिएको छ ।
१७ वर्षीया बालिकाले म्युजिक भिडियो छायाङ्कनका क्रममा आफुसँग नजिकिएका शाहले पटक–पटक ब’ला’त्कार र यौ’न दु’र्व्यव’हार ग’रे’को भन्दै जिल्ला प्रह`री कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
पल शाह प्रक`रण यतिबेला गर्माएको छ । एक नाबालिग गायिकाले अभिनेता शाहविरु`द्ध उजु`री दिए`पछि पल केही दिनदेखि प्र`हरी हिरासतमा छन् । उनी हिरा`सतमा गएपछि कोही पलको पक्षमा छन् भने कोही पी`डित बालिकाको पक्षमा छन् ।
प्रह`रीले पललाई हिरा`सतमा राखेर अनु`सन्धान जारी राख्दा यस विषयमा नेपाली सेले`ब्रिटीहरु खुलेर बोल्न थालेका छन् । उनी`हरुले यस बिषयमा गम्भीर हुन,नारीको सम्मान गर्न र बाल`बालिकाहरुका अधिकारको रक्षा गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।
Prevबहराइनबाट यसरि अपराधी ल्यायो प्रहरीले ! बहराइनबाट १६ वर्ष पछि यसरी समात्तिए ( भिडियो सहित )
Nextगीत गाउन मात्र होइन, घरायसी काममा पनि उस्तै अब्बल छिन् गायिका समिक्षा अधिकारी-हेर्नुहोस् (भि’ डियो सहित)